စစ်တောင်းမြစ် ဒီရေလှိုင်းကြောင့် နေအိမ်ရေမျောပြီး မိသားစုဝင်များ ပျောက်ဆုံးနေ
စစ်တောင်းမြစ် ဒီရေလှိုင်းကြောင့် နေအိမ်ရေမျောပြီး မိသားစုဝင်များ ပျောက်ဆုံးနေ ကျိုက်ထိုမြို.နယ် စစ်တောင်းကျေးရွာမှာစစ်တောင်းမြစ်ဒီရေရိုက်ခတ်မှုကြောင့် စက်တင်ဘာ ၂၀၊ရက်နံနက် (၅း၃၀)အချိန်ခန့်ကနေအိမ်တစ်လုံးမြစ်ရေထည်းမျောပါသွားကြောင်း(ကန)ဉီးသတင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းအတည်ပြုချက်ရယူခဲ.ရာဒီရေ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ် ၁လုံး နှင့်အတူ နေမိသားစု(၅)ဉီးမြစ်ရေ ထဲမျောပါသွားကြောင်း(ရင်းမြစ်)မှသိရသည်။ အဆိုပါနေအိမ်က စစ်တောင်းကျေးရွာရဲ. အေးသီတာရပ်ကွက်ကမ်းနားပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ.ဦးလင်းလင်း ( ဘ )ဦးအေးသိန်း၏ သားဖြစ်သူရဲ.နေအိမ် ဖြစ်တယ်တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ နေအိမ်မှာဦးလင်းလင်းတော.မရှိပါဘူးသူ.ရဲ.ဇနီးဖြစ်တဲ.(ဘ)ဉီးသိန်းမြင့်ရဲ.သမီးဒေါ်ကြည်ခင်နှင့်အတူ […]
စိုးစန္ဒာအမည်ရှိ ကင်းမွန်မီးထွန်းလှေနစ်မြုပ်မှုအား တပ်မတော် (ရေ) မှ ကူညီကယ်ဆယ်
စိုးစန္ဒာအမည်ရှိ ကင်းမွန်မီးထွန်းလှေနစ်မြုပ်မှုအား တပ်မတော် (ရေ) မှ ကူညီကယ်ဆယ် တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့မှ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ထွက်ခွာလာသည့် လှေသား ၆ ဦး လိုက်ပါလာသော စိုးစန္ဒာအမည်ရှိ ကင်းမွန်မီးထွန်းလှေတစ်စီးသည် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီခွဲခန့်တွင် ဘုတ်ပြင်းမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် […]
ကိုဗစ်ကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းဆို့မရှိဘူးဟုပြောကြား
ကိုဗစ်ကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းဆို့မရှိဘူးဟုပြောကြား ကိုဗစ်ကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၈ရက် ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ လုံးဝမရှိဘူးလို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ပြောရေးဆိုခွင်ရှိသူ ဦးမြင့် နိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ယနေ့မှာ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ့နဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှုမှာ […]
တဈခုခုကိုဖကျလိုကျရမှ အိပျပြျောတတျတဲ့ အကွောငျးအရငျး
ပြိုမတေို့ အိပျပွီဆိုရငျ ခေါငျးဦးတှကွေားထဲ ပြျောမှပွေီ့း ခွထေောကျကတညျးခှ၊ လကျကလညျး အဲဒီခေါငျးအုံးတှကေို ဖကျလိုကျရမှ အိပျပြျောတဲ့ လူတှရှေိကွလားမသိဘူး။ ဒီလို တဈခုခုကို ဖကျထားရမှ အိပျပြျောတဲ့လူတှဟော ဘာကွောငျ့မြားဖွဈမလဲ၊ နောကျ ကောငျးကြိုးတှေ ဆိုးကြိုးတှရေော ရှိနဦေးမလားဆိုတာ ကွညျ့ရအောငျ။ အစှဲလနျးသိပျကွီးလို့ ခေါငျးအုံးကိုဖကျပွီး အိပျခွငျးဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာသဘောတရားအရ အစှဲလနျးကွီးခွငျးကိုလညျး […]
ညတိုင်းနီးပါး ခွေးတွေအူနေကြတဲ့ အကြောင်း နိမိတ်ကောက် အဟော
ညတိုင်းနီးပါး ခွေးတွေအူနေကြတဲ့ အကြောင်း နိမိတ်ကောက် အဟော အ မင်္ဂလာ မို့ မရေးခဲ့တာပါ။ မိတ်ဆွေ လေးငါးဦး ထံတော့ ဖုံးဆက် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေး၏။ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁ ခွဲ ၂ လောက် ခွေးတွေ တော်တော်အူပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်တွေက အူတာပါ။ […]
ဘာလုပျလုပျအဆငျမပွသေူမြား ဒုက်ခအခကျအခဲလှနျစှာမြားသူမြား အတှကျ ယတွာနညျးတဈခု ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ တဈခြို့ လူတှမှော ကံလေးကောငျးလာရငျ စီးပှားရေးလေးခဏကောငျးလာပွီး ကံညံ့လာရငျစီးပှားပွနျကသြှားတတျ၏။ တဈခြို့သူတှမှော အလုပျလှနျစှာလုပျ၏၊ ဥာဏျလညျးအလှနျကောငျး၏၊ ပညာလညျးအလှနျတတျ၏၊ ဝီရိယလညျးလှနျစှာရှိ၏။ ဘာလုပျလုပျ ၊ ဘာကိုငျကိုငျ အဆငျမပွသေူမြားလညျးတှရေ့တတျ၏။ ကံဇာတာက ကောငျးပမေယျ့လညျး အဆငျမပွသေူမြားလညျးရှိတတျ၏။ ဘာကွောငျ့ဖွဈတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာ မြားစှာ […]
သင့်ပါးစပ်က ထွက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းက သင့်ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ အတိတ်နိမိတ်များ
သင့်ပါးစပ်က ထွက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းက သင့်ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ အတိတ်နိမိတ်များ ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေရင် တနေ့တခြားကြပ်တည်းလာတာ ပိုသိသာလာတယ်၊ အဆင်မပြေဘူးလို့ ခနခနတွေးနေရင် ပိုပြီး အဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်။ ဒါအယူအဆမဟုတ်ဘူး ဘာသာရေး အတွေးမဟုတ်ဘူး။ Psycho သဘောပဲ ကြားရဖန်များရင် အတွေးတွေဖြစ်လာတယ်။ ပြောပါများရင် အာ့အတိုင်း ယုံကြည်လာတယ်။ ကြာတော့ […]
ကိုဗစ်ကြောင့် မွေးနေ့ကုသိုလ်ယူဖို့ အ်ိမ်မှာပဲစီစဉ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူး
ကိုဗစ်ကြောင့် မွေးနေ့ကုသိုလ်ယူဖို့ အ်ိမ်မှာပဲစီစဉ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူး ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော် ရွှေထူးဟာ ဂီတအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုကို ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတော် ရွှေထူးရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် အိမ်အပြင်ထွတ်လို့ မရတဲ့အတွတ် အိမ်မှာနေရင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ […]
မုန်း၍ လည်းကျိန်စာ မတိုက်နဲ့ ချစ်ခင်၍လည်း နောက် ဘဝပြန်တွေ့ ပါရစေ ဆုမတောင်း ပါနဲ့ ဘယ်သောအခါမှ မုန်း၍လည်း ကျိန်စာ မတိုက်ပါနှင့် ချစ်ခင် ၍လည်း နောက်ဘဝပြန်တွေ့ပါရစေ ဆုမတောင်းကြ ပါနဲ့ ကံ ကံ၏ အကျိုးရယ် သံသရာ ဆိုတာ ကိုရယ် ယုံကြည် […]
ကင်းဆိပ် နိုင်သည့်အပြင် အချို့သောရောဂါဝေဒနာများကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့မုရိုးပင်(သို့)ငဖြူကြီးပင်
ကင်းဆိပ် နိုင်သည့်အပြင် အချို့သောရောဂါဝေဒနာများကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့မုရိုးပင်(သို့)ငဖြူကြီးပင် ကင်းထိုးကင်းကိုက်ငဖြူကြီးလိုက်” ဟုရှေးဆေးဆရာကြီးတစ်ဦးပြောဖူးသည်။ကင်း(၃)ကင်းရှိသည်။ကင်းခြေများ၊ကင်းမလက်မည်း (ခေါ်)ကင်းမြီးကောက်၊ကင်းပျ လေးတို့ဖြစ်သည်။ တောသူတောင်သားတို့ မမျှော်လင့်ပါပဲ ကင်းထိုးကင်းကိုက်ခြင်းမကြာခဏခံရ တတ်ပြီး အတော်လည်းခံရဆိုးပါသည်။မုရိုးပင်အား ငဖြူကြီး၊နဖြူကြီး၊နို့ခဲပင်၊မရိုးပင်၊ကျွဲပေါက်ပင် အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည်။ ထိုအပင်မှာ လမ်းဘေးတွင် အလေ့ကျပေါများစွာပေါက်တတ်ပါသည်။အများပြည်သူနှင့်တောသူတောင်သားတို့ မုရိုးပင်၏ ဆေးအသုံးလေးသိပါက ကင်းထိုးကင်းကိုက်ခြင်း ခံရသူကို ပျောက်ကင်းသက်သာ စေသောနည်း လမ်းပြနိုင်ပါမည်။ […]